BEMANEVIKA - SAMBAVA : Samy nidoboka am-ponja ilay tovolahy sy ny renin’ilay zaza
Trangam-piarahamonina hafa kely indray no niseho tao amin’ny Kaominina Bemanevika, Distrikan’i Sambava tamin’ny herinandro lasa teo. 20 novembre 2017
Renim-pianakaviana iray no nahatratra ny lehilahy iray nitondra ny zanany vavy vao 12 taona monja tamin’ny toerana mangingina.
Taitra tampoka ny tovolahy raha vao nahita ilay ramatoa. Nandositra avy hatrany ity farany ary hadinony teo ny môtô noentiny, latsaka ihany koa ny findainy nandritra izany. Noentin’ilay renin-jazavavy ireo entana tavela teo amin’ny toerana nahatrarana ny zanany sy ilay tovolahy. Ampitson’io nampandre ny tompon’andraikitra tao an-toerana ny ramatoa ary noraisin’ny Ben’ny tanàna lefitra ireo fitaovana rehefa nitondra fitarainana teny aminy io renim-pianakaviana io.
Kinanjo nitory ilay tovolahy amin’ireo entany notazomin’ny renin’io zazavavy tsy ampy taona nadalainy io.Ny alakamisy teo kosa nidoboka am-ponja vonjimaika ity renim-pianakaviana ity sy ny vadiny taorian’ny famotorana natao azy ireo. Ny sabotsy teo anefa dia nitsimbadika indray ny raharaha ka voatazona am-ponja vonjimaika ihany koa ilay tovolahy nitory satria nitory noho ny fanodinkodinana zaza tsy ampy taona ilay renin-jazavavy.
Araka ny vaovao voaray farany dia nohainoin’ny Polisy ihany koa ny fanazavan’ny lefitry ben’ny tanàna nitazona ny fitaovan’ilay tovolahy, ka mbola tsy fantatra ny mety hahazo ity tompon’andraikitry ny Kaominina ity hatreto. Anio no ho fantatra ny tohin’ny raharaha mahakasika ireo olona voampanga manoloana ny tranga nisy tao Bemanevika ity.